Nabad-sugidda Jubba oo tobbanaan qof u qabtay masuul xalay lagu dilay magaalada Kismaayo – Radio Daljir
Diseembar 11, 2013 2:22 b 0
Kismaayo, December 11, 2013 – Ciidamada nabad-sugida ee maamulka Jubba ayaa xalay howl-galo baaxad leh ka sameeyey magaalada Kismaayo, gaar ahaan aaga suuqa Aargada, halkaas oo lagu dilay masuul ka tirsan Jubba.
Nabad-sugidda ayaa qabqabtay in ka badan 40 ruux oo dadka aaga joogay ah, kadib markii la dilay masuul ka tirsanaa qaybta canshuuraha ee dekedda magaalada Kismaayo.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubba saraakiil? u hadlay waxay sheegeen in la qabqabtay dad badan oo laga shakiyey, isla markaasna haatan ay socdaan weydiimo iyo baaritaano lagu samaynayo dadka xir xiran.
Taliyaha nabad-sugida maamulka Jubba Jamaal Cumar Maxamuud ayaa canbaareeyey dilka loo gaystay maasuulka ka tirsanaa dekedda, wuxuu xusay sarkaalku in baaristu ay sii socon doonto.
Masuulka ka tirsan Jubba ayaa la dilay goor uu ka soo baxay salaadii maqrib ee xalay, lama oga ilaa hadda waxa uu salka ku hayo dilka loo geystay sarkaalka ka tirsan dekedda magaalada xeebta ah